पैसाको माध्यमबाट कोरोना फैलिने उच्च जोखिम: के छ पैसालाई कीटाणुरहित बनाउने प्रविधि ? – Khabar Silo
काठमाडौं – विश्व नै अहिले कोरोना महामारीको त्रासमा छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल बन्दाबन्दीकै अवस्थामा छ । बन्दाबन्दी भएपनि हरेक कामका लागि पैसाको आवश्यकता परिरहन्छ ।
ती आवश्यकता परिपूर्तिका लागि हामीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था वा त्यसले सञ्चालन गरेको एटिएमसम्म जानुपर्ने हुन्छ । एटिएममा गएर हामीले पैसा त निकाल्छौँ तर त्यो कति सुरक्षित छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ । पैसाको माध्यमबाट कोरोना भाइरसलगायत विभिन्न सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना उच्च रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
न्यूयोर्क युनिभर्सिटिले गरेको एक अध्ययनअनुसार पैसामा पनि ‘सुक्ष्म जीव’ बाँच्न र हुर्कन उपयुक्त वातावरण भएको प्रमाणित भइसकेको छ । पैसामा तीन हजार भन्दाबढी प्रकारका कीटाणु जस्तै भाइरस, व्याक्टेरिया, सामान्य कीटाणु र ढुसी देखा परेका छन् । त्यस अध्ययनमा बैंकबाट निकालिएको पैसामा आठ प्रकारका व्याक्टेरिया देखिएका थिए । अध्ययनअनुसार तरकारी बजार, मासु पसल, पान पराग पसल, पेट्रोल पम्प, जुत्ता सिलाउने पसल र माग्नेसँग भएको नोटमा शतप्रतिशत जीवाणु हुने पुष्टि भएको छ । विभिन्न किसिमका प्राणघातक सरुवा रोगको व्याक्टेरियाले पैसामा सङ्क्रमण भएको पुष्टि गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको पैसामा कोकेन भएको ‘फरेन्सिक साइन्स इन्टरनेशनल’ले प्रमाणित गरिसकेको छ । हेपाटाइटिस सीको स्रोतका रुपमा कोकेनलाई लिइन्छ । एक तथ्याँक अनुसार अमेरिकामा वार्षिक ३६ हजार मानिसको फ्लूसंग सम्बन्धीत रोग लागेर मृत्यु हुने गरेको छ । तीमध्ये १० प्रतिशतको मृत्यु पैसाबाट फ्लू लागेर हुने गर्छ ।
यसैगरी दक्षिण अफ्रिकाको पैसा पनि ९० प्रतिशत विभिन्न किसिमका प्राणघातक व्याक्टेरिया तथा ढुसीबाट दूषित भएको पाइएको छ । मास्टर कार्डका अनुसार शौचालय र जुत्ताको तलुवा भन्दा पैसा बढी फोहोर भएको परीक्षणका क्रमममा पाइएको थियो । पैसा अन्यन्तै क्रियाशील हुने र जसको हातमा पनि पुग्ने भएकाले पैसा बिभिन्न रोगको संवाहक हुनसक्छ । कागज तथा कटनको नोटमा भन्दा पोलिमर नोटमा जीवाणु कम समय रहन्छन । नोटभन्दा क्वाइनमा भाइरस तथा ब्याक्टेरिया धेरै समय रहन्छ । नोटमा २ दिनसम्म र क्वाइनमा लामो समयसम्म भाइरस रहन सक्छ । स्विस अध्ययनले पैसामा १२ दिनसम्म जीवाणु रहन सक्ने बताएको छ । क्यासको विकल्पको रुपमा कार्ड प्रयोग गरिने अभ्यास छ । कार्ड पनि सङ्क्रमित हुनसक्छ । चिकित्सकहरुले पनि कुनै पनि भाइरसका जीवाणु पैसामा करिब दुई सातासम्म जीवित रहनसक्ने बताउँदै आइरहेका छन् ।
रौतहट । महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल र छिमेकी मुलुक भारतमा लकडाउन लागू गरिएको छ । दुई देशबीच आवतजावत बन्द गर्न सीमाक्षेत्रमा नेपाली र भारतीय सुरक्षाकर्मीले व्यापक कडाइ गरेका छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका साथै भारतीय अर्धसैनिक बल एसएसबीले २४ सै घन्टा निगरानी बढाएका छन् । यद्यपि, खुला सिमानाका कारण […]
काठमाडौं उपत्यकाका निषेधाज्ञा लागू, उल्लंघन गरे के सजायँ हुन्छ ?
१६ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा आज विहानबाट निषेधाज्ञा सुरु भएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा विहान ६ बजेदेखि निषेधाज्ञा सुरु भएको हो । संघीय राजधानीमा कोरोना संक्रमणको दर ह्वात्तै बढेपछि उपत्यकाका तीनवटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको संयुक्त बैठकले वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा वैशाख १६ गते बिहान […]
काठमाण्डौं – नेपालमा लकडाउन सुरु भएपछि प्रभावित भएको अर्को ब्यवसाय हवाई उडान पनि हो । नेपालमा कोरोनाको दोस्रो संक्रमित फेला परेपछि सरकारले चैत ११ गते लकडाउन घोषणा गरेको हो । त्यस यता आन्तरिक र वाह्य हवाई उडान बन्द भएका छन् । वाह्य हवाई उडान चार्टर मात्र भएका छन् । विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई ल्याउन र […]
कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा भनाभन : नागरिकतामा देउवाको लाइन खारेज !